ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကော်လာပေါ်က နှုတ်ခမ်းနီ”
"ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်မွှေလိုက်မယ် ချိုပေစွဟင်းချိုကို စလောင်းတိုအခြေပဲ့နှင့် အာခေါင်မှာ ပူအောင်ထည့်လို့မြိုလှည့်ကွဲ့လေး.."
ပို့စ်တစ်ခုလုံးမှာ ဒီကဗျာလေးကိုပဲ မန့်လိုက်တာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့နော်..
>> myo…. ဆက်ပေးလိုက်တာ ကျေးဇူးပဲဗျိုး။ ကျနော်အဆုံးအထိ ရွတ်ကြည့်တော့… ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်မွှေလိုက်မယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို စဉ်းစားလို့မရဘူး။ ဒါကြောင့် ကြားထဲမှာ ရွတ်ရတာ ဟာတာတာ ဖြစ်နေလို့ ဆုံးအောင်ဆက်မထည့်ဘဲ ချန်ထားရစ်ခဲ့တာ။း-)
>> anonymous မီးမလောင်ပါဘူး။ ရယ်ချင်တာပါ။ သူပူလောင်နေတာကိုမြင်လို့ သူ့ကို ရေးတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ အကြောင်းကြားတာပါ။း-)
ကျနော်ရည်ညွှန်းတဲ့သူတွေက တကယ့်ဆရာကြီးတဆူ လုပ်နေသူတွေပါ။ တချို့ကို နှစ်ကြိမ်လောက် လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဖူးပါတယ်။ အရင်နှစ်တုန်းကလည်း 8-8-2008 မတိုင်ခင် ပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲဆိုပြီး လုပ်ခဲ့သေးတယ်။ အခုလည်း သက်ဆိုင်ရာ ဘလော့ဂ်တခုမှာ ပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲအကြောင်း မိုးမွှန်အောင် ပြောလွန်းလာလို့ နားကလောပြီး အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေ ရေးခဲ့တာဗျိုး။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားလူက မဆီမဆိုင် ကြားထဲက ၀င်ပြီ်း ယုန်ထောင်ကြောင်မိဖြစ်နေလို့… ထုတ်ပြောရတာ… ရှင်းပြီလား။ ဂါးဖီးလေသံနဲ့ ပြောရရင်….စိတ်ညစ်တယ်။း-)
ကိုပေါရဲ့ blog ကို သရော်စာတွေကို သဘောကျလို့ အမြဲဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ...။ သရော်စာက တစ်ဖက်သားကို အထိနာသွားအောင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးဖြစ်သွားရင်တော့ မကောင်းဘူးထင်ပါတယ် ...။ အဲဒီကဗျာကိုလည်း သရော်စာ ကဗျာအနေနဲ့ကြိုက်ပါတယ် ...။
သရော်စာ အကြောင်း အက်ဆေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ဖူးတာလေးမှတ်မိနေတယ် ...။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေတိုးပွားမှုနဲ့ အစားအသောက် ပြတ်လပ်မှုတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို Cannibalism. ဆိုပြီး သရော်ပြီးဖြေထားတာပါ ...။ အဲဒီလို သရော်စာမျိုးကပြုံးရတာ ပိုလွတ်လပ်တယ်လို့ ခံစားရတယ် ...။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေပါလာတော့ ရယ်စရာမကောင်းတော့ဘူး ...။ သရော်စာရေးတဲ့သူတွေ အားလုံးမှာ လေးနက်တဲ့ ဒဿန နဲ့ ဟာသအမြင်ရှိကြပါတယ် ...။ ကိုပေါရဲ့ posts တွေမှာ satire ကောင်းတွေ အများကြီးဖတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...။
ကိုပေါရေ… ဘန်နာလေးနဲ့ အမေစုပုံလေးက သင်္ကြန်ရနံ့ တွေ ရနေတယ်…
>> Zephyr …. သဘောတူပါတယ်။ အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။း-)
>> တန်ခူး …. တူးပို့…. တူးပို့….. (ထပြီး က ချင်လာအောင် သင်္ကြန်တီးလုံးသံလေး ပေးလိုက်မယ်။)
As You Said above & Expected,
You can do , write, say & expected whatever in your very own blog...
we don't want to see your Very Own ( ဆဲလုံးများ၊
ကြမ်းတမ်းသော အသုံးအနှုန်းများ )
OUR-VERY-OWN Daw Aung Sun Su Kyi's Photo together in same page...side by side...!
( btw, we had enough with SPDC' Newspaper ' Stupid-writings about her )
So asaresponsible person, Kindly DROP Her photo from your Very Own Blog...
From Blog Reader
( If U want to go out & do Dirty things, U don't Bring your Dad' photo, Right..? )
ခပ်ချိုညစ်ထေ၊ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် မွှေလိုက်မယ်၊
ချိုပေစွ ဟင်းချိုကို၊ စလောင်းတို အခြေပဲ့နှင့်၊
မြိုလှည့်ကွယ့်လေး .... ။
အပေါ်က ကွန်မန့်မှာ "ခပ်ချိုညစ်ထေ" တလုံး ကျကျန်ခဲ့တာမြင်လို့ပါ။
>>>Anonymous (3:27 PM) … ကဗျာကို ဖြည့်စွက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပဲဗျို့။ တဆိတ် အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်…. အဲသည် အပေါ်က ကဗျာလေးရယ်……. နောက်တပုဒ်က…….“ယင်းသည့်နေ့ဆိုင်၊ ရသေ့သူတော်တိုင်မှ၊ ဉာဏ်မခိုင်ဈာန်ယိုင်လျှောရတယ်၊ ရာသီတွင် စာညီပြောပေပ၊ ကြော၍သာမြဲ” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးရယ် လိုချင်ပါတယ်။
ဆရာမမေဓာဝီဆိုရင်တော့ သေချာပေါက် ရမှာသေချာတယ်။ သွားပြီး နားပူရမှာ အားနာလို့။
အောက်တပုဒ်ကို ရွတ်ကြည့်ရင်း မှတ်မိသလောက် ချရေးလိုက်ပါတယ်။ ဖြည့်စွက်ပေးရင် ကျေးဇူးတင်မှာပါ။
ပျော်တယ်ပေါ့ ဟုတ်လား.. (အော်.. ကိုပေါ.. ကိုပေါ... )
အဲဒီလူကြီးကလေ..တစ်နဲ့ တ ဘယ်ဟာမှန်လဲဆိုပြီး စာတပုဒ်ရေးတယ်..ပြီးတော့ သူ့ဘလော့မှာ သူငယ်ချင်းကို သယ်ရင်းဆိုပြီး မြန်မာစာကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးရေးထားတယ်.မကြီးမငယ်နဲ့..သိပ်ဆိုးတာပဲ.. ပြန်ပြင်ဖို့ ထောက်ပြထားတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်တယ်..
အဲဒီလို လူမျိုးတွေပေါ့.. မှားလို့ထောက်ပြလဲ ငါလုပ်ချင်တာလုပ်မယ် လာမပြောနဲ့ဆိုတဲ့ အချိုးမျိုးနဲ့ လူတွေကို ဂရုမစိုက်ဘူး..
ဒီလိုလူမျိုးတွေ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရင်. ငါ့မြင်းငါစိုင်း ငါ့လှေငါထိုး ဘယ်ရောက်ရောက်ဆိုပြီး လုပ်ချင်တာ လုပ်တတ်တယ်.. လူထုကို မလေးစားတတ်ဘူး..
သူလိုလူမျိုးတွေ.. နိုင်ငံရေးဆက်မလုပ်တာ ပိုကောင်းတယ်.. အနားယူပါစေ.သွားမပြောနဲ့.ထားလိုက်.. သူ့အတွက် သူပုန်အမျိုးအစား အသစ်ထွင်ပေးရမယ်..
ပြီးတော့ ရှိသေး.စာဖတ်သူကို စော်ကားတဲ့ စာရေးဆရာမကိုလဲ အားပေးအားမြှောက်ပြုသေးတယ်.. လူကြီးဖြစ်ပြီးတော့.
How can all these Stupids-People can become Leaders in anyway...
WhataIdiot' thought.!
Ko Paw, definitely ur blog will become dirty abusive ground soon as longest as u hv being allowed such kind of stupid comments. Point him out the C box add "http://www.pofpeacocks-eng.co.cc/2008/02/dear-brothers-and-sisters.html"
. Come on guy if u dare, we r there.
ဘန်နာလေးလှတယ်။ ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ..အရောင်လေးလည်းလှတယ်။ ကိုပေါပျော်နေတယ်ဟုတ်။
>> ငပွေး …. ပျော်ဒယ်လဲ မဟုတ်ရပါဘူး။ အူမြူးတာပါ။း-)
>> မုန်းစရာ …. စစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်မြဲနေတာ ဗိုလ်ချုပ်တွေကြောင့်ချည်းပဲမဟုတ်။ ကျနော်တို့ကိုယ်၌က အာဏာရှင်အသေးစားကလေးတွေကို ပြုမူကျင့်ကြံနေလို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
>> ko …. လင့်ခ် ညွှန်ပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
>> ကြည် …. ပျော်သလားလို့မေးတော့ ပျော်စရာကြီးပါ။ ဘန်နာအရောင်ရွေးတာကတော့ မဒမ်ပေါရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုကို နာခံပြီး လုပ်ရတာပါ ခင်ညာ။